» सुन्दा पत्यार नलाग्लाः २५ वर्षिय युवा ७ हजार ५ सय करोडका मालिक !
सुन्दा पत्यार नलाग्लाः २५ वर्षिय युवा ७ हजार ५ सय करोडका मालिक !
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार ०७:४२
एजेन्सी । २५ वर्षको उमेरमै ७ हजार ५ सय करोडको मालिक बन्नु चानचुने विषय होइन । आफ्नै अथक मेहनत र सफलताले यो सम्भव भएको हो । त्यो भन्दा पनि उनले लगाएको दूरदर्शी परिकल्पना नै अधिकांश युवाहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
युवाअवस्थामै ७ हजार ५ सय करोडको मालिक बन्ने युवा हुन्– रितेश अग्रवाल । भारतीय नागरिक अग्रवालले एक वर्षको अवधिमा मात्र आफ्नो सम्पतिमा १८८ प्रतिशतले वृद्धि गरे ।
उनी ‘ओयो’ नामक होटल तथा आवास सेवा कम्पनीका मालिक हुन् । जसका उनी संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । उनको कम्पनीको भारतका ५ सय भन्दा बढी शहरमा मात्र १८ हजारभन्दा बढी होटल संचालनमा छन् । अहिले प्रत्यक्षरुपमा २० हजार जना भन्दा बढीलाई उनले रोजगारी दिएका छन् । संसारभर ओयोमा आवद्ध होटलको संख्या ३५ हजार छ ।
विश्वका ८० ओटा मुलुकका ८ सय भन्दा बढी सहरमा १२ लाख कोठाहरु ओयो मार्फत उपलब्ध छन् ।
नेपालका काठमाडौँ, पोखरा लगायतका सहरमा पनि ‘ओयो’ साइनबोर्ड देखिन्छन् ।
ओयोको पुरा रुप हो, ‘अन योर ओ’ अर्थात् ‘तपाइको आफ्नोमा’ । यसको अर्थ सवै आफ्नो नियन्त्रणमा । जुन होटलको रुममा बस्नुहुन्छ त्यहाँ सबै तपाईकै नियन्त्रणमा हुन्छ, उच्चस्तरको सेवासुविधासहित । १७ वर्षमै पढाई छोडेका रितेशले त्यसपछि उनले व्यावसायिक जीवन शुरु गरे । सस्तोमा राम्रो बासस्थानको रुपमा ओयोको थालनी गरे । हाल उनी कसरी सफल उद्यमी बन्ने भन्ने कुरा पढाउँदै हिड्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘म विश्वविद्यालयमा गएर लेक्चर दिंदा उनीहरुलाई पढाई छाड्न उत्प्रेरित गर्छु किनकि म जस्तै पढाई छाडेर सफल बनेका बिल गेट्स र ओला क्याबुका सहसंस्थापक ३२ वर्षे भविष अग्रवाललाई मेरा प्रेरणाका स्रोत मान्छु ।’
खबरहब डटकमबाट साभार